LibreOffice 4.0.3 fanatsarana zava-kanto kely | Avy amin'ny Linux
Fanatsarana ny zavakanto bitika LibreOffice 4.0.3
marianogaudix | | famolavolana
Manararaotra manararaotra manambara fanatsarana kely ireo kisary LibreOffice aho. Nanampy sary masina bebe kokoa amin'ny Faenza Icons aho, namorona lohahevitra vaovao antsoina hoe Simple Kalahari ihany koa mba hanomezana fahasamihafana kely.
Simple Kalahari dia mbola eo an-dalam-pandrosoana
Lazaiko aminao fa nanana olana tamin'ny Tranomboky VOLREOffice VCL aho, satria tsy eken'izy ireo ny sary masina misy mangarahara, noho izany antony izany dia ovako ny sary masina Faenza.
Ny lesoka amin'ny fampiasana sary masina mangarahara ao amin'ny LibreOffice dia ny tsy fahitana ireo sary mihetsika tsy miasa. Avelako ny sarin'ny fanovana natao.
1 Kisary Faenza
2 Kalahari tsotra
Avelako ny rohy fampidinana ireo sary masina novolavolako.
Natolotro ny mpamolavola LIbreOffice ny asako ary nomen'izy ireo tohiny. Iray amin'ireo mpamorona lehibe ny sary masina ao amin'ny LibreOffice i Mirek2, ilay miandraikitra ny fitazonana ireo sary masina Tango ao LibreOffice. Issa Alkurtas dia mamolavola sary masina antsoina hoe Flat icons.
Ity misy rohy iray ahitanao ny asan'i Mirek2y avy amin'i Issa Alkurtass.
Raha te handao ny soso-kevitrao momba ny LibreOffice ianao dia miangavy anao apetraho amin'ny lisitry ny firafitra LibreOffice.
Ianao mpampiasa dia afaka manampy amin'ny hevitrao hanatsarana ny sary masina sy ny fitsikerana mahasoa. Afaka mifandray amiko ianao amin'ny alàlan'ny Gnome-look.org izay amin'ny alàlan'ny rohy fampidinana ireo sary masina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » famolavolana » Fanatsarana ny zavakanto bitika LibreOffice 4.0.3
Tena tiako ny Kalahari, tohizo ny asa tsara.
Misaotra betsaka amin'ny asanao 😀
Toa tsara ny asanao… .Mba tsara, tohizo
Veloma ireo sary masina.
LibreOffice 4.1 beta dia mitondra ny sidebar Lotus
Raha mila fanazavana fanampiny.
Asa tsara, tohizo!
Eny te-hanolotra zavatra aho, na dia tsy noho ny foto-kevitr'ilay lahatsoratra aza izany. Sady tsy tena vaovao no tsy tena tany am-boalohany: momba ny fandaminana ny menus programa amin'ny lafiny iray (amin'ny gimp, blender, sns).
Heveriko fa ho fandrosoana lehibe izany satria ny LibreOffice dia mahazo tombony amin'ny fampiasana azy satria manararaotra tsara kokoa ny efijery (indrindra raha ny efijery amidy ankehitriny dia 16: 9). Angamba efa fantatrao ny tiako holazaina, raha tsy izany dia misy rohy: http://pauloup.deviantart.com/gallery/28216273
Mety ho fandrosoana ihany koa raha misy menio fanovana kely hiseho rehefa misafidy zavatra eo akaikin'ny entana voafantina (ireo avy aminay Microsoft Office - I, farafaharatsiny, malahelo azy).
Na izany na tsy izany, mieritreritra aho fa tsy hampaninona izany raha misy olona mamaky ity lahatsoratra ity ary mifandray amin'ireo olona ao amin'ny LibreOffice, mampahafantatra anay raha ao na tsia izy ireo.
Phytoschido dia hoy izy:
LibreOffice dia mampiditra patch AOO ho an'ny "Sidebar".
Mamaly an'i Fitoschido
Fitoschido nolazainao iray volana lasa izay fa tsy niova ny AOO
tsy mifanohitra. Heveriko fa ny Sidebar dia hampiharina amin'ny Impress fotsiny mba handaminana zavatra tsara kokoa.
Raha raisina amin'ny fomban'ny Lotus in Writer na Calc ny sidebar, dia fifanoherana amin'ny tetikasa LibreOffice izany ary tsy ho tetikasa mahaleo tena intsony raha tsy miankina amin'ny AOO 4.X.
Zavatra tsy tiako ny momba an'i Lotus dia ny boaty Combo, tsy manao toy izany ry zareo. Tsy maintsy namorona bokotra mampihetsika ny fikandrana mipoitra izy ireo…. Afaka nanao izany tamin'ny Gtk 3.6 aho. http://www.youtube.com/watch?v=9ckRn_sx8CE
Tsy hitako ny mifanohitra amin'izany, azafady.
Tsara. Amin'izao fotoana izao dia tena hamokatra ny libreoffice.
Azonao atao ny mamela ny tolo-kevitrao momba ny LibreOffice, ao amin'ny lisitry ny famolavolana LibreOffice.
Tokony hojerentsika raha azo atao amin'ny VCL Library of LibreOffice izay tena ratsy.
Fahagagana raha mahita ny LibreOffice ho toy izany fanesoana izany aho.
. Ny VCL Library dia tsy mifanaraka amin'ny Gtk 3.6 na Qt 4.11 ka ny LibreOffice dia tsy mandeha tsara amin'ny KDE na GNOME.
// ///.... // // ///.
Namorona POC kely miaraka amin'ny Gtk 3.6 aho
manandrama manao zavatra mitovy amin'ilay fanesoana napetrakao.
Tena tsara !!! Raha misy zavatra azo tsikeraina LibreOffice dia tena io.
Ny zavatra manelingelina ahy dia ny ao amin'ny LibreOffice ao amin'ny forum ataon'izy ireo dia betsaka ireo mivarotra setroka avy amin'ny vazy ary mandany ny fotoanany miresaka bla, bla ..., ary tsy nanampy ahy mihitsy izy ireo.
Mba hamoronana ireo sary masina ireo dia tsy maintsy nianarako tamin'ny fitsapana sy ny hadisoana ny tenako. Manampy ireo olona ao amin'ny Awken Dark, FS Icons ary Nitrux aho hampivelatra ny fonosana LibreOffice. Maninona ny LibreOffice no mihatsara miaraka, ankoatr'izay
ary hahafinaritra ny mahita ireo sary masina Awken Dark, FS ary Nitrux mampanan-karena ny fahasamihafana.
Tena tsara izany, saingy izao aho te-hanontany zavatra anao
Ny Office Libreako dia toa mahatsiravina, manana endrika Windows 98 amin'ny endriny rehetra ary tsy afaka nanova azy mihitsy aho.
Jereo ary tsy hitako mihitsy hoe maninona no toa izao .. misy olona manana hevitra hanovana azy? Ao amin'ny Manjaro Xfce aho
Hitanao ny tsy fitovian'ny tranomboky VCL miaraka amin'ny GTK.
Jereo ity fampianarana ity
XFCE dia voasoratra miaraka amin'ny GTK
noho izany tsy maintsy apetakao amin'ny fampidirana ny interface graphique.
Nanokatra ny terminal aho ary nametraka
sudo apt-mahazo mametraka libreoffice-gnome
azonao atao koa ny mametraka ny tranomboky patch amin'ny synaptic
apetraho amin'ny finday synaptic
libreoffice-gnome sy libreoffice-gtk3
apetraho ireo tranomboky.
Asa lehibe inona no ataonao ho an'ny fiarahamonina.
Mahagaga ny sary masina, misaotra betsaka !!! 🙂
Tongasoa, azafady ……. Manoro hevitra anao aho ny hidiranao tsindraindray ny pejy Gnome-look.org mba hisintomana ireo sary masina ……… satria ampiako ireo kisary tsy hita ao anaty fonosana hamenoana azy.
Joe_T dia hoy izy:
Misaotra betsaka fa tsara be ry zareo!
Mamaly an'i Joe_T
Asa tsy mampino, miarahaba anao aho, ny ataonao dia fandraisana anjara lehibe.
Voalohany indrindra, te-hiarahaba anao aho noho ny asa tsara ataonao miaraka amin'ireo sary famantarana Faenza ho an'ny LibreOffice. Arahabaina, tsara ianao. 😉
Faharoa, nahita rafitra iray aho mba hialana amin'ny bibikely Italic, Bold ary UNDERLINED:
Ny olana dia ireo sary ao anaty fisie ao anaty lahatahiry manokana fiteny. Izany hoe, ao anatin'ny lahatahiry CMD ho an'ny fiteny tsirairay dia misy kisary manokana ho an'io fiteny io.
Amin'ny tranga misy antsika, ao amin'ny folder ES dia misy ireo sary masina manga izay miseho tampoka.
Ny vahaolana arosoko dia ny fanaovana rohy an'ohatra fa tsy hamafana azy ireo.
Ao amin'ity rohy manaraka ity dia misy ny vahaolana ampiharina sy voasedra (amin'ny GNU / Linux):
Misaotra betsaka anao nanampy ahy jeSuSdA 8), tena tiako izany.
Vao avy novaiko ny sary masina Kalahari hamahana ny lesoka mitovy amin'izany, nanova ny làlan'ny zana-tsipìka ho an'ireo firenena manana soratana silamo ao Faenza sy Kalahari koa aho.
Ataovy izao ny UPDATE ao amin'ny gnome-look.org hampahafantatra ny fanovana.
Misaotra betsaka anao JesUSdA 8)
Tsy ilaina, Mariano.
Misaotra anao tamin'ny asa mahafinaritra nataonao. Ny sary masina dia mijery tsara ary mifangaro tanteraka amin'ny sisa amin'ny birao. 😉
Miarahaba ary manantena aho fa ampidirin'izy ireo ao anaty kinova LibreOffice manaraka izany!
tena tsara, hanofana azy kely aho haha
LucasMatias dia hoy izy:
Akory ny hatsarany indrindra ireo avy any Kalahari 🙂
Valiny amin'i LucasMatias
Misaotra anao nanolotra ahy ireto sarinao mahafinaritra be ireto miaraka amin'ny foko hitadiavana olona sy ireo kisary kalahari 🙂 mahafinaritra be ny Libreoffice.
Misaotra betsaka ho an'ny olona toa anao ary manatsara ny traikefa gnu / linux.
Tongasoa ianao Alexander, amin'ny fiaraha-monina dia zaraina sy hatsaraina ny zava-drehetra.
Mirary soa ho anao aho.
ajshd dia hoy izy:
Mahafinaritra ireo sary masina, saingy tsy mirindra tsara amin'ny interface amin'ny tontolon'ny linux.
Mamaly an'i ajshd
Tiako ilay Faenza!
Ny fanontaniana maimaim-poana dia hanova ny endriny indray andro any ary mahita fa efa ela aho dia nilaza fa hiova ho Citrus na fisehoana hafa indray andro any dia hiafara amin'ny fanaovana azy io na tsy hitany mazava ny manova ny endrik'izy ireo.
Raha toa ka ho avy miaraka amin'ny fanovana .LibreOffice amin'ny kinova 4.1 dia mitondra ny sidebar Lotus Symphony
Eto ianao dia afaka mahita ireo sary voalohany an'ny LibreOffice 4.1 beta -
Mahaliana tokoa ny mahita raha efa namoaka ny kinova 4.1 izy ireo ary andao jerena raha toa tsara toa ny sary sy ny video toa anao rehefa mampiasa azy. 🙂
Mametraka KDE 4.10.3 amin'ny Debian Wheezy 64 Bits
LibreOffice Calc: Ahoana ny fomba hamoronana tabilao miely